बाबुराम र वैकल्पिक राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
यद्यपि उनी स्वयंको अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठ हेर्दा धेरैलाई आशंका थियो । प्रश्नहरू थिए— के भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? भट्टराईलाई नयाँ चिन्तनका लागि प्रेरित गर्ने राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूबारे धेरैको आशंका थियो । कतै उनी आफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थनलाई शक्ति स्वार्थको जुवामा च्याँखे त थापिरहेका छैनन् ? आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए ।
यद्यपि भट्टराईको पछिल्लो कदम वैकल्पिक राजनीतिका लागि नोक्सानको विषय होइन, त्यो बरु उनले निर्माण गर्न चाहेको द्विविधा र भ्रमको अन्त्य हो ।
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनका मुख्यतः तीन आयाम छन्— वैचारिक आयाम, संगठनात्मक आयाम र राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्गठनको आयाम । वैचारिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिले आजसम्म अंगीकार गरेका समग्र विचार शृंखलाहरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न हो । जस्तो— हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।
पुरानाहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर पुरानै त छानिन्छ ! त्यसैले भट्टराईको पलायन र नयाँ शक्तिको विघटन वैकल्पिक राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । तर यो वैकल्पिक राजनीतिका सम्भावनाहरूको अन्त्य होइन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ । बाटो उज्यालो छ । नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका लागि बहस गरौं । प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०१
राज्य किन आवश्यक छ ? हिजो राज्यको आविष्कार निश्चित वर्गहरूको सुख र वैभवका लागि गरियो । निश्चय नै यो क्रूर र निरंकुश थियो । त्यसैले भनियो— राज्य वर्गीय हुन्छ । यसर्थ राज्य दमनको साधन बन्यो । अब त्यो पक्षपाती युगको अन्त्य हुनुपर्छ । अब राज्य न वर्गीय हुन्छ, न त दमनको साधन । यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यहाँ जनता एक व्यापक, बहुआयामिक र बृहत्तर परिचय हो । त्यो अर्थमा ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य र समन्वयात्मक अर्थव्यवस्था’ले नै नयाँ चरित्रको राज्य र वैकल्पिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ । त्यसैले ज्याक डेरिडाले भनेझैँ अब विचारको ‘विनिर्माण’ आवश्यक छ । लौ छलफल गरौं, नेपाली राजनीतिको समानान्तर विचार के हुनसक्छ ? पूर्वाग्रहबाट विचारको विनिर्माण हुँदैन ।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७५ ०९:१४